စာအုပ်စင် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 38
မိုးမခစာအုပ်စင်၊ မေ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ ပြည်တွင်း ပြည်ပက တိုးတက်တဲ့ အမြင်အာရုံရှိတယ်လို့ ခံယူထားတဲ့ လူကြီး၊ လူငယ်တွေ စုပေါင်းထုတ်တဲ့ “ခေတ်မောင်း” ဆိုတဲ့ အီးစာစောင်ထွက်လာတယ်။ စာရေးသူတွေက ဘလော့ဂ်၊ အီးမေး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်၊ ၀က်ဆိုက်၊ စတဲ့ မီဒီယာအသီးသီးမှာ လက်စွမ်းလက်စရှိသူတွေချည်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ စာစောင်ရဲ့ အာလုပ်စကားကတော့ အစုိုးရနဲ့ အတိုက်အခံတို့ ပြည်သူ့အကျိုးကနေ သွေဖီမှုတွေကို တည့်မတ်ဖို့၊ အသံမဲ့သူတွေ ကာကွယ်ဖို့၊ အားဖြစ်စေဖို့ နဲ့ ပြည်သူလူထုကို နိုင်ငံတကာနဲ့ မိတ်ဆက်ပြီး အတွေးအခေါ်မြှင့်ပေးဖို့လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ပုံမှန် အွန်လိုင်းပေါ် ထွက်နေကျ ကော်ပီအင်ပေစ့် စာစောင်တွေထက် သူတို့တတွေက အများကြီးအားထုတ်ထားတယ်လို့ ဆိုနိုင်တယ်။ စာဖတ်သူတွေကို ဘယ်လောက် လှုံဆော်နိုင်မလဲဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင်...
၀တ်မှုန် (စင်ကာပူ) မေလ ၁၊ ၂၀၁၂ စာအုပ်အမည် – ကျွန်တော်သိသော တရံရောအခါများ စာရေးသူ – ကိုကိုမောင်ကြီး ကိုကိုမောင်ကြီးစာအုပ်ကို ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပြီး ကောက်နုတ်ရရင် …. ၁။ မျက်စိဆရာဝန်ဝန်ကြီးဦးသန်းမောင်၊ စာရေးဆရာမဒေါ်ကြွယ်ကြွယ်၊ သမီး။ တူမ ကိုအေးသိန်း-မအေးချို၊ ဗမကစောမြင့် (မဟေသီ)၊ မြတ်ထန် (ဗမကတင်မောင်)၊ မိုးမိုးတာရောစန် (ဗခက ခင်မောင်သောင်း) တို့ကို ကျေးဇူးတင်စကား ရေးထားပါတယ်။ ၂။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ ၁၉၆၂ မှာ ဗိုလ်မှုးကြီးသန်းစိန် (စစ်ဦးစီ ဗမက)၊ ပြည်တဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စိုး (စစ်ရာထူးခန့် အတွင်း ၀န်) တော်လှန်ရေးကောင်စီ ၁၇ ဦးမှာ အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ခံ ၈ ဦး (၀န်ကြီးရာထူး) ရှိပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက (၃)...
Bo Hin Thar – ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းသည် မလွဲမရှောင်သာ၍ အာဏာသိမ်းခြင်းလော
မိုးမခစာဖတ်ခန်းကောက်နုတ်ချက်၊ ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၁၂ အင်န်အယ်ဒီပါတီထုတ်ဒီဝေ့ဗ်စာစောင် (Dwave) အတွဲ ၁ ၊ အမှတ် ၁၃၊ စာမျက်နှာ ၂၃ တွင် ဖေါ်ပြပါရှိသည်။ ဗိုလ်ဟင်္သာ (၁၉၉၉ အောက်တိုဘာ) – “ ၁၉၆၂ ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းသည် မလွဲမရှောင်သာ၍ အာဏာသိမ်းခြင်းလော” ဆောင်းပါး ကောက်နုတ်ချက်။ ဗိုလ်ဟင်္သာ (ခ)ဗိုလ်လွန်းတင် (NLD) ဟု ဆိုသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
သန်းစိုးလှိုင် ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၂ • ဘာသာပြန်ဆိုသူ – စိန်ဝင်းစိန် • ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် – ပထမအကြိမ်၊ ဇွန်လ ၂၀၁၀ ခုနှစ် • ထုတ်ဝေသည့်တိုက် – လောကသစ်စာပေ • တန်ဖိုး – ၃၀၀၀ ကျပ် • စာမျက်နှာ – ၃၅၄ မျက်နှာ …….. …… ….. ၁၉၅၀ ခုနှစ်ကျော်ကာလက သမ္မတဖြစ်သူ ဦးဘဦးက ၎င်း၏ကိုယ်ရေးအထ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ကို ထိုစဉ်ကတည်းက အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေး သားခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့်တနှစ်ကျော်ကမှ ယင်းစာအုပ်ကို ကျွန်ုပ်၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုသည့်အမည်ဖြင့် မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထုတ်ဝေလိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။ ဦးဘဦးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်သည်။ ဦးဘဦး၏အကြောင်းကိုဖတ်ရှုရင်း သူဖြတ်သန်းခဲ့သည့် ကိုလိုနီခေတ်...
သန်းဝင်းလှိုင်ရဲ့ သမိုင်းတကွေ့မှ အကျော်ဇေယျအမျိုးသမီးများ စာအုပ် တကယ်ထွက်ပါပြီ ကြိုတင်မှာကြားသူများထံ ရှေ့တပတ်အတွင်း ပို့မည်။ ပုံနှိပ်ပြီးမှ မှာယူလိုက ဒေါ်လာ ၂၀ ဖြင့် ၀ယ်နိုင်ပါပြီ မိုးမခ၊ မတ် ၂၅၊ ၂၀၁၂ ကြိုတင်မှာကြားပုံနှိပ်စနစ် (print on demand) ကို စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ စာရေးဆရာ သန်းဝင်းလှိုင်ရဲ့ စာမျက်နှာ ၄၀၀ ထူတဲ့ “သမိုင်းတကွေ့မှ အကျော်ဇေယျအမျိုးသမီးများ” ထုတ်ဝေရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ရာ ယခု မတ်လကုန်မှာ အမှန်တကယ် ထွက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်ငွေပေးမှာကြားသူ မိုးမခစာဖတ်သူများနဲ့ စာရေးဆရာသန်းဝင်းလှိုင်ရဲ့ ပရိသတ်ကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြင်ပက မှာယူသူများကို စာပို့ခ အပုိုထပ်ဆောင်းပေးဖို့ တောင်းခံလွှာကို စာအုပ်နဲ့ အတူ ထည့်သွင်းမေတ္တာရပ်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (စာအုပ်ရပြီးမှ...
MoeMaKa Book – လူငယ် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာပြဿနာနှင့် သမိုင်းကိုဖန်တီးသူများ
စာအုပ်အမည် – လူငယ် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာပြဿနာနှင့် သမိုင်းကိုဖန်တီးသူများ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ မတ် ၄၊ ၂၀၁၂ ကလောင်စုံ – သာဘန်း၊ မောင်မောင်လှမြင့်၊ သစ္စာနီ၊ ဦးဘုန်း(ဓာတု)၊ နောင်ကျော်၊ ဦးတင်ဦး(ကျူရှင်) ကြည်မင်း၊ မောင်ခင်မင်(ဓနူဖြူ)၊ ခင်မြဇင်၊ မိုယ်းဇော်၊ မြေလတ်မောင်မြင့်သူ၊ ကြူးနစ်၊ ဇော်ခိုင်ဦး၊ ဂျူနီယာဝင်း၊ အောင်ထက်လူ၊ ခင်စောတင့်၊ ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း၊ ဒေါက်တာမောင်သင်း၊ စိုးဦး(ဒသာန)၊ စိုးမြင့်လတ်။ ထုတ်ဝေသူ မှတ်တမ်း – ခေတ်ပြတိုက်စာပေ အုပ်ရေ ၁၀၀၀ ပထမအကြိမ် ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ စာမျက်နှာ ၁၈၄ တန်ဖိုး ၂၀၀၀ ကျပ် စာရေးဆရာစုံ၏ လူငယ်များအတွက်ဟု ရည်စူးကာ ဆောင်းပါး ၂၁ပုဒ်၊ စာရေးဆရာ ၂၁ ယောက်၏...
မိုးမခပင်တိုင်စာရေးဆရာ သန်းဝင်းလှိုင်၏ “သမိုင်းတကွေ့မှ အကျော်ဇေယျအမျိုးသမီးများ” စာအုပ် ထွက်မည် မိုးမခ၊ ဖောဖော်ဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ မှတ်စု မှတ်တမ်း သမိုင်း အချက်အလက်များ စုဆောင်း လေ့လာရေးသာရာတွင် အမည်ရသည့် စာရေးဆရာဖြစ်သည့် သန်းဝင်းလှိုင်က ၎င်းစုစည်းထားသည့် “သမိုင်းတကွေ့မှ အကျော်ဇေယျအမျိုးသမီးများ” စာအုပ်ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မိုးမခက အဆိုပါစာအုပ်ကို ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိရာတွင် စာအုပ်ကို စုဆောင်း သိမ်းဆည်း ဖတ်ရှုလိုသည့် စာဖတ်သူများ ကြိုတင်မှာကြားသည့် အရေအတွက်အတိုင်း ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။ အီးဘွတ်များနှင့် အင်တာနက်များ ကျေးဇူးကြောင့် ပုံနှိပ်စာအုပ်များ မှာယူရောင်းချရသည့် စာရိတ်စကမှာ သီးသန့်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ Print on Demand နှုန်းဖြင့် စရိတ်ကျဉ်းကျဉ်း၊ ၀န်ကျဉ်းကျဉ်းဖြင့် စာအုပ်များကို...
Burmese Monks Book on sale – ရဟန်းတော်များနဲ့ နိုင်ငံ့အရေး – ဆောင်းပါးများစုစည်းမှု
ရဟန်းတော်များနဲ့ နိုင်ငံ့အရေး – ဆောင်းပါးများစုစည်းမှု စီစဉ်သူ – အရှင်ပညာနန္ဒ ပြည်တွင်းပြည်ပ သံဃာများ၊ စာရေးဆရာများ ရေးသားတဲ့ ဆောင်းပါးပေါင်း ၂၆ ပုဒ်၊ စာမျက်နှာ ၁၄၀ တန်ဖိုး – အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ ဖြင့် မှာယူစုဆောင်းပါ။ မြန်မာပြည်ထောင်စုသစ်ရဲ့ ရဟန်း ရှင်လူ ပြည်သူတွေရဲ့ သမိုင်း၊ မှတ်တမ်းနဲ့ ခံစားချက်တွေကို သင်ကိုယ်တိုင် သိမ်းဆည်းထားပြီး မျိုးဆက်သစ်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပါ။ ကျုပ်မယ်တော်က ကျုပ်ကို ဓမ္မကထိက သိပ်ဖြစ်စေချင်တာ။ ကျုပ်သာ ဓမ္မကထိကဖြစ်ရင် မယ်တော်က တရားဦးဟောရင် သူ့ကိုအရင်ဟောရမယ်တဲ့။ ကျုပ်ဘ၀မှာ တကယ်မမေ့ဘူး။ ကျုပ်တို့ကို ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ စစ်သားတွေ ရိုက်နေတဲ့အချိန် မိုးမရွာပဲနဲ့ မိုးကြိုး ၂ ကြိမ်ပစ်တယ်။ လက်ဖြစ်တချက်တီးစာလောက်လေးအတွင်းမှာပဲ ကျုပ်တကိုယ်လုံးပေါ့ပါးသွားတယ်။...
ကျော်​ထင်​ ● ကြိုးစားမှု ဘိန်း​ကျွေးခြင်း https://t.co/f9ioAKIEnn https://t.co/kbyQx7LMIJ about2hours ago ReplyRetweetFavorite